TAAKULAYNTA – Isuroon Somali
Home / TAAKULAYNTA
Isuroon waa urur safka hore kaga jira la shaqeynta gobolka iyo ka hadalka walaacyadayada jira si wax looga qabto midab takoorida maldahan iyo wax ka bedelida nidaamyada si loo sii hagaajiyo hor u kaca haweenka Soomaalida ah.
Waxa aanu raacnaa qaab dhex dhexaad ah oo aan xisbina raacasanayn si aan ugadoodno sidii gabdhaha iyo haweenka Soomaaliyeed ay ku heli lahaayeen daryeelcaafimaad xarunta gobolka ee la yiraa Copital, ulana kulano mas’uuliyiin ka mid madaxda gobolka iyo shaqaalahooda aana saameyn ugu yeelanosidii baarlamaanka iyo gudoomiyaha gobolku ay ugu dari lahaayeen daryeelida haweenka Soomaalida ah go’aamadooda bulshada ee ku saabsan yareynta kala sareynta daryeelada. Waxaan soo jeedinaa talooyinka ku salaysan macluumaad lagu soo aruuriyey cilmi baarsiyada ka qayb galka ku salaysan ee beesha kagu dhex sameeyey.
Isuroon iyadoo sii wada hawlaheeda gargaarida ah ayey waxa ay ka qaban qaabisay soo saarida labo sharci baarlamaanka Minnesota si wax looga qabto kala sareynta dhanka caafimaadka ka jirta loona siiyo maal gelin mashaariic daryeel caafimaad ah oo dhaqanka ahaan u gaar ah caafimaadka haweenka Soomaaliyeed, kuwaas oo guulo wacan lagala kulmay.
Hadii aad tahay mas’uul doonayo akhbaar ama urur raba in aan ka wada shaqeynodadaalayada taakulaynta iyo u hadlida ah, fadlan naga soo wac khadkan: 612-886-2731